होलीमा रङ खेल्दै हुनुहुन्छ ? स्किनलाई यसरी जोगाउनुहोस् - InHeadline
By Anu Rana on Mar 21,2019 - 12:59
छालाको संक्रमण, छाला चिलाउने, पोल्ने लगायतका समस्या निम्त्याउन गर्छ । यो समस्या नहोस् भन्नका लागि होलीमा छाला सम्बन्धि विशेष सर्तकता अपनाउन जरुरी छ । ताकी छालालाई सुरक्षा प्रदान होस् । यसको लागि होली खेल्नु पूर्व छालामा यस्ता कुरा लगाउनु पर्छ, जसले गर्दा छालामा कुनै पनि समस्या हुन बाट बचाउदोछ ।
होली खेल्नुअघि र खेलेपछि के–के कुरामा ध्यान दिने ?
कपालमा धेरै तेल लगाउने र कपाल राम्ररी बाँध्नुपर्छ।
मुखमा मोस्चराइजर तथा सन्स्क्रिन क्रिम लगाउने।
लामो समयसम्म रङ शरीरमा नराख्ने।
होली खेलिसकेपछि रङ निकाल्न छालामा बेस्सरी रगड्नु हुँदैन। त्यसैले रङ खेल्नुअघि नै शरीरमा तेल लगाएर जानु उपयुक्त हुन्छ। यसले गर्दा रसायनले छालामा असर गर्न पाउँदैन र रङ छिटो निकाल्न पनि सहयोग गर्छ।
रङ पखाल्न साबुनको प्रयोग गर्नुपर्छ।
छाला चिलाउन वा पोल्न थाल्यो र आँखामा रङ पस्यो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ।
कतिपय केमिकलले नङ पाक्न पनि सक्छ। त्यसैले नेल पोलिस लगाउनुपर्छ।
नुहाइसकेपछि पनि मोस्चराइज क्रिम लगाउनुपर्छ।
होलीमा रङ्ग खेल्दा अनुहारमा रङ्ग लाग्ने गर्दछ । यस्तो रङ्ग पखाल्नका लागि छालामा साबुनको प्रयोग नगर्ने । त्यस्तै, रङ्ग निकाल्न छाला बेस्सरी नरगड्ने । र, अरुलाई पनि रगड्न नदिने । त्यतिमात्र हैन, रङ्ग गएन भन्दैमा हतास तथा निराश कदापी नहुने र छालामा विभिन्न किसिमका सामग्री प्रयोग गर्नबाट पूर्णतया जोगिने ।
ट्याग - होलीमा रङ खेल्दै हुनुहुन्छ ? स्किनलाई यसरी जोगाउनुहोस्